बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास किनबेच भएको हो ? सरकारले पार्‍यो प्रष्ट « OSBreak
बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास किनबेच भएको हो ? सरकारले पार्‍यो प्रष्ट
काठमाडौं । सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास रहेको जग्गा किनबेच नभएको स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको निवासको जग्गा किनबेच नभएको जानकारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिको सिफारिसका आधारमा ललिता निवासको जग्गा किनबेचमा रोक लगाइएको हो । ‘प्रम निवासको जग्गा किनबेच भएको छैन, जोडिएको ललिता निवासको कुरा हो’, उनले भने ।
सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनले यसबारे थप छानविन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बताए । ‘दोषी देखिन्छ भने कोही पनि उम्कँदैन, यसमा सत्ता र प्रतिपक्षको प्रश्न हुँदैन’ मन्त्री बास्कोटाले भनेका छन् । अनुचित ढंगले व्यक्तिको नाममा लगिएको जग्गा सरकारको नाम ल्याइछाड्ने उनले बताए ।
ललिता निवासको जग्गा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले समेत किनेको पाइएको छ । यसबारे के हुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले भने, ‘नेकपाको महासचिवले यस विषयमा वक्तव्य जारी गरिसक्नुभएको छ । उहाँ फर्जी धन्दामा संलग्न भएको होइन । कसैको नाममा भइसकेको जग्गा किनेको हुँ भन्नुभएको छ ।’ उनले अगाडि भने, ‘उहाँले त ठगीमा पर्नुभयो, उहाँ अपराधी होइन ।’
नक्कली कागज बनाएर प्रारम्भिक तहमा जसको नाममा जग्गा आयो र जसले त्यसमा भूमिका खेले, उनीहरुमाथि कारबाही हुने उनले बताए । मन्त्री बास्कोटाले भने, उहाँ (पौडेल) त पीडित भइसक्नुभो । उहाँले जग्गा किन्नुभयो, जग्गा परेछ नक्कली ।’
भोला लामिछाने , यूरोप – एन आर एन लाई साझा संस्था बनाउनु पर्छ भन्दै आफु
लमजुङ र हिमाली जिल्ला मनाङबीचको एक मात्र बेँसीशहर-चामे सडक खुल्यो
लमजुङ, २९ भदौ : लमजुङ र हिमाली जिल्ला मनाङबीचको एक मात्र बेँसीशहर–चामे सडक खुलेको छ
काभ्रेपलाञ्चोक, २९ भदौ: जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले डेंगु रोग नियन्त्रणपछि मात्रै समायोजनमा परेका स्वास्थ्य कर्मचारीलाई
भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाद्वारा शैक्षिक सुधारका लागि ९७ बुँदे कार्ययोजना तयार
भोजपुर, २९ भदौ: भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि सरोकारवाला पक्षसँग बृहत् छलफल
अञ्जु पन्तको नयाँ गीतमा सुन्दरी मोडल मरिष्का र निराजनको धमाकेदार अभिनय
काठमाडौँ, असोज १५ । चर्चित गायिका अञ्जु पन्तको स्वर रहेको गीत देउरालीको कसमको म्यूजिक भिडियो
बिच्च बिच्चमा पछि दुर्गेश थापाको अर्को दमदार गीत ‘बोल्दैन फोटो’माको भिडियो हेर्नुहोस्
काठमाडौं । चर्चित मोडल तथा गायक दुर्गेश थापाको अभिनय रहेको नयाँ गीत ‘बोल्दैन फोटो’ बोलको
भाईरल बाबाको अंग्रेजी गीत सुनेर पोखराका दर्शक मुर्छा, पोखरामै घर बनाएर गाँजा तान्ने बाबाको रहर (भिडियो)
पोखराको पृथ्वीचोकमा कुन्ती मल संचालनमा आएको छ । मलको शुभारम्भको अवसरमा भाईरल बाबा समेत पोखरा